एमालेको 'आइटी आर्मी', 'युथ फोर्स' अनि ‘बा’को बोली
नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्ताबाट हटेको दुई साता पनि भएको छैन । प्रधानमन्त्री हुँदा झण्डै दुई तिहाई सांसदको मत पाएका ओली सरकारबाट हट्नुअगाडि ८३ जनामा खुम्चिए ।
अघिल्लो साता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्‍वासको मत लिँदै गर्दा ओलीको पक्षमा ८३ सांसद मात्रै देखिए । यद्यपि संसदमा ओली अध्यक्ष रहेको नेकपा एमालको मात्रै १२१ सांसद छन् ।
सत्ताबाट हटेको केही दिनमै आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई ‘गद्दार’ भन्‍ने देखि भूलचुक आममाफी दिने कुरा समेत गर्न भ्याएका ओलीले त्योभन्दा ठुलो कुरा यही समयमा पार्टी नेता, कार्यकर्ता, विद्यार्थी, मजदुरबाहेक आर्मी र फोर्स समेत बनाउन लगाए ।
एमालेको ‘आइटी आर्मी’ र ‘युथ फोर्स’ नामक दुई संगठन यतिबेला चर्चामा छ । आइटी आर्मीको घोषणा पार्टी स्थायी समिती सदस्यहरुको उपस्थितिमा भएको छ भने युथ फोर्स पार्टी महासचिवकै उपस्थितिमा भएको छ । पार्टी अध्यक्षसँगको समन्वयमा नेताहरुले नै अगुवाई गरेकोले यसलाई पार्टीको आधिकारिक सेना र फोर्स भन्‍न सकिन्छ ।
देशको संविधान, कानून, लोकतन्त्र सबै आफैं हूँ भन्‍ने दम्भ र घमण्डले एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रधानमन्त्री पद गएको सत्य सबैलाई थाहा छ । यद्यपि उनले चाहिँ त्यतिबेलाको विपक्षी गठबन्धनमा आफ्नै पार्टीका सांसदको मिलेमतो र अदालतमा मुद्दा हालेर आफुलाई हटाएको आरोप लगाएका छन् ।
यसको ब्याख्या र बिश्लेषण कानुनका विज्ञ र उनकै राजनीतिक सहयात्रीले नै गर्दै जालान् । अहिलेको सत्य भनेको सत्तामा रहँदा ओलीले गरेका लोकतन्त्र विरोधी हर्कत र भष्मासुर प्रवृत्तिका कारण उनी बालुवाटारबाट बालकोट पुगेका हुन् ।
२०५२ साल फागुन १ देखि शुरु भएको जनयुद्धलाई ज्यानमारा र आपराधिक कार्य देख्‍ने ओलीले २०७५ जेठ ३ पछिको ३ वर्षबाहेक अधिकांश समय माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई हत्याराको नाइके र जनमुक्ति सेनालाई हत्यारा भनिरहे । यद्यपि माओवादी जनयुद्धलाई उनले अहिले पनि ज्यानमारा युद्ध नै भनेर सम्बोधन गर्दछन् ।
उनका कुनैपनि अभिव्यक्तिमा जनयुद्ध मात्रै होइन लोकतन्त्र र गणतन्त्रको समेत सम्मान गरेको पाईंदैन । तर, अनौठो संयोग भनौं अहिले ओलीले माओवादी जनयुद्ध र त्यसका कमाण्डरहरुलाई सत्तोसराप गर्दा ताली बजाउनेमा जनयुद्धमा लागेका वरिष्ठ नेताहरु रामबहादुर थापा ‘बादल’, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्टहरु ओलीसँगै छन् ।
परिवर्तनको आन्दोलनमा मृत्यु वा मुक्तिको सपथ खाएर अगाडि बढेका तिनै कमाण्डरलाई हत्यारा र अपराधी देख्‍ने एमाले अध्यक्ष कमरेड ओली अर्थात एमाले पार्टीभित्रका सर्वमान्य ‘बा’ यतिबेला आर्मी र फोर्स गठनमा किन लागे ? सेना, प्रहरी, सशस्त्र त राज्यसँगै छ ।
फेरि ओली ‘बा’लाई वा एमाले पार्टीलाई सेना र फोर्सको आवश्यकता किन पर्‍यो ? गणतन्त्रको लागि गरिएको आन्दोलनलाई ‘बयलगाढा चढेर अमेरिका जानु जस्तै’ भनेर अपमान गर्ने तर आफुलाई लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो ठान्‍ने ‘बा’लाई उनका कार्यकर्ताले यो प्रश्‍न सोध्नुपर्ने होइन ?
माओवादी पार्टी छाडेर एमालेमा विलय भएका प्रभु शाहले गठन गरेको आइटी आर्मी र एमाले महासचिव ईश्‍वर पोख्रेलले घोषणा गरेको फोर्सको औचित्य के हो ? कुन उद्देश्ले यो आर्मी र फोर्स गठन गरिएको हो ? अहिलेसम्म ‘बा’को बोली बाट बेलिविस्तार सुन्‍न पाइएको छैन । यी सेना र फोर्स आफ्नै पार्टीभित्रका गद्दार भनिएका विरुद्ध मात्रै परिचालित हुने हुन् वा राज्यविरुद्ध लड्ने सेना हो ? अझै लोकतन्त्रको लागि लडेर आएका माओवादी, नेपाली काँग्रेस, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग लड्न यो फोर्स गठन गरिएको हो ? यो कुरा स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
देशलाई समृद्धि र विकासमा लैजान हो भने पार्टीले सेना र फोर्स गठन गर्न आवश्यक थिएन होला । त्यसको लागि जनतासँग मिलेर काम गर्ने युवाशक्ति वा आइटी विज्ञहरुको समूह बनाएर देशलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सकिन्थ्यो होला । अझ देश र जनताको सेवामा लगाउन यो फोर्स र सेना गठन गर्ने काम आफैं प्रधानमन्त्री भएको बेला गरेको भए अझै जनमुखी, विकासमुखी सरकार भनेर चिनिन्थ्यो होला । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भनेर झार उखेल्ने नाममा कार्यकर्तालाई राज्यकोषबाट करोडौं बाँड्नु भन्दा विकासे फोर्स र सेना बनाएर बाँडेको भए अझै लोकप्रिय नेता भइन्थ्यो होला कि !
यदि सत्ताबाट हट्नु परेको बदला लिनको लागि कसैलाई डर, त्रास देखाएर अझै लोकप्रिय बन्‍न खोजेको हो भने ‘बा’ को लागि यो प्रत्युत्पादक बन्‍न सक्छ । हतियार बनाएर मात्रै हुँदैन त्यसलाई चलाउने विधि पनि सिक्नु जरुरी हुन्छ । तर, सडकमा प्रदर्शन गर्न, जनता तर्साउन अनि चुनाबको बेला मतदाता धम्काउनको लागि यो सेना र फोर्स गठन गरिएको हो भने लोकतन्त्रमा यो मान्य हुँदैन । एमालेभित्रका कतिपय नेताका अभिव्यक्ति सुन्दा ओली नेतृत्वको एमाले पार्टीले आधिकारिक रुपमा नै यी सेना र फोर्स गठन गरेको स्पष्ट नै छ ।
शनिबार राजधानीमा भएको युथ फोर्स भ्याली कमाण्ड घोषणासभामा पार्टी अध्यक्ष ओली नै प्रमुख अतिथि हुने प्रचार थियो । तर, कार्यक्रममा ओलीकै शन्देश लिएर महासचिव ईश्‍वर पोख्रेल गएका थिए । एमालेका युवा नेता महेश बस्नेतको अगुवाईमा गठन भएको भ्याली विशेष फोर्सको घोषणा गर्दै बस्नेतले एमाले पार्टी फुटाउने गरी अध्यादेश ल्याए ‘आगो बाल्ने’ धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिए । उनको यो अभिव्यक्ति र बालुवाटार छाडेर बालकोट पुगेका ‘बा’ले बार्दलीमा उभिएर दिएको अभिव्यक्ति मिल्दोजुल्दो छ ।
त्यसमाथि दिनहुँजसो फोर्स र सेना गठनको कुरा गर्नु र सडकमा बाँदरे जुलुस निकाल्नुले पनि एमाले पार्टीले गठन गरेका आइटी आर्मी वा युथ फोर्सको आवश्यकता र औचित्य बारे ‘बा’कै मुखबाट स्पष्ट हुन जरुरी छ ।